Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Joao Cancelo Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Football with the nickname "Gypsy". Anyị Joao Cancelo Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Nyocha a gụnyere oge ndụ ya, nzụlite ezinụlọ, ndụ onwe onye, ​​eziokwu ezinụlọ, ụdị ndụ ya na obere ihe ndị ọzọ amaara ama gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọsọ ya, ike ya na ike iwe ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Joao Cancelo's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Douglas Costa Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Akụkọ Joao Cancelo Nwatakiri - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite na, João Pedro Cavaco Cancelo mụrụ na 27th ụbọchị nke May 1994 na Barreiro na Setúbal, Portugal. Ọ bụ otu n'ime ụmụaka abụọ amụrụ nne ya, Filomena na nna ya Joseph.
Joao Cancelo mụrụ nye nne na nna ndị amachaghị banyere ya.
A zụlitere onye isi ala Portuguese nke agbụrụ ọcha na mgbọrọgwụ Europe na ebe amụrụ ya na Barreiro na Setubal, Portugal ebe o toro n'akụkụ nwanne ya nwoke a ma ama a na-akpọ Pedro.
A zụlitere Joao Cancelo na Barreriro na Setubal, Portugal.
Na-etolite n'obodo ya, Cancelo na-eto eto bụ akụkụ nke ụmụaka ndị nyere onwe ha obi ụtọ mana agbasaghị egwuregwu bọọlụ n'okporo ámá tupu ọ sonye n'otu mpaghara - Barreirense ebe ọ nwere mmasị mbụ ya na asọmpi asọmpi.
Akụkọ Joao Cancelo nke Educationmụaka - Mmụta na Ọrụ Buildup:
Ka ọ na-erule oge Canecelo dị afọ 13, ọ gbanyelarịrị na egwuregwu bọọlụ maka klọb nwata ya - Barreirense - ma nwekwaa oke nka nke gosipụtara ya dị ka onye na-agbachitere nwa nwere nnukwu atụmanya.
Nuno Mendes Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Na-adịghị Eke Ndụ
Joao Cancelo ya na ndi otu ndi otu nwata ya sere - Barreirense.
N'oge na-adịghị anya, ndị na-egwu egwuregwu sitere na Benfica nwetara ekele nke prodigy nke bọọlụ mere ka ọ banye na ụlọ akwụkwọ mmuta ha na 2007. Otu a ka ọrụ Cancelo si wulite '' Ugo 'nke mepụtara ikike ya ma n'ọnọdụ aka nri na aka ekpe.
Joao Cancelo Childhood Akụkọ - Ndụ Ndụ Mmalite:
Cancelo dekọtara ịrị elu na-aga n'ihu n'etiti usoro ntorobịa Benfica wee mee ka asọmpi mbụ ya na ndị otu egwuregwu klọb ahụ mgbe ha na Gil Vicente zutere enyi na 28th nke July 2012.
Ọrụ ndị bidoro n'oge gara aga hụrụ Cancelo ịmaliteghachi na njikọ aka ya na Benfica's B-akụkụ ebe o nyere oke ya iji nyere ndị otu aka mmeri Portuguese Cup makwaara dị ka asọmpi mba.
Foto dị obere nke Joao Cancelo n'oge ya na Benfica's B-Side.
Joao Cancelo Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Tupu Cancelo emesịa soro ndị otu mbụ Benfica nwee asọmpi mbụ ya, ọnwụ nke nne ya Filomena nwụrụ n'ihe ọghọm ụgbọ ala nke ya onwe ya so na ya. Onye ahụ dị afọ 18 ya na nwanne ya nwoke bụ Pedro nọ na Audi. A3 nke nne ya chụpụrụ isi ezinụlọ ya - Joseph - na ọdụ ụgbọ elu Lisbon Portela.
Diogo Dalot Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
N’ịlaghachi azụ, ụgbọ ha tinyere aka na ihe mberede mebiri Filomena ebe nwụrụ na Cancelo na Pedro nwere obere mmerụ ahụ. N'agbanyeghị na Cancelo na-egbu mgbu ma na-ewutekarị iwe, mama ya nwụrụ dị ka onye na-anya ụgbọ ala iji wee nwee ihe ịga nke ọma. N'ihi ya, o mechara nweta egwuregwu asọmpi ya maka Benfica imegide Gil Vicente na Jenụwarị 2014 wee gaa n'ihu igosi ụmụ nwanyị ya na Primeira Liga.
Nemanja Matic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Joao Cancelo dị afọ 18 mgbe nne ya nwụnahụrụ ya n'ihe mberede okporo ụzọ.
Joao Cancelo Bio - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Ka ọnwa ole na ole gasịrị na August 2014, Cancelo sonyeere Valencia na nkwekọrịta mbinye ego nke metamorphopho n'ime nkwekọrịta na-adịgide adịgide. Mgbe ọ nọ n'akụkụ ndị Spain, Cancelo gbara na asọmpi UEFA Champions League tupu ọ banye na Inter Milan ebe ọ malitere ọrụ ya.
Ngwa ngwa ngwa rue ụbọchị, Cancelo bụ onye ọkpụkpọ guzosiri ike nke Manchester City - klọb ọ sonyere na ụbọchị 7 nke August 2019 - mgbe ọ dekọsịrị ihe ịga nke ọma na Juventus FC gụnyere mmeri aha Supercoppa Italiana na Serie A.
Maurizio Sarri nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Joao Cancelo meriri Serie - A aha ya na Juventus tupu ọ banye Manchester City.
Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Joao Cancelo hụrụ Ndụ na Daniela Machado n'anya:
Joao Cancelo alọtabeghị n'oge a na-ede ederede. Anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara akụkọ gbasara nwoke na nwanyị na ọnọdụ mmekọrịta ọhụụ. Iji malite, Cancelo amabeghị na ọ nwere ụbọchị ọ bụla tupu o zute enyi ya nwanyị Daniela Machado.
Joao Cancelo ya na enyi ya nwanyị Daniela Machado.
Birhụnanya ndị ahụ zutere na 2017 mgbe Cancelo ka na-egwuri egwu maka Inter Milan abụbeghị ihe na-enweghị atụ kemgbe ahụ. Ọ bụghị naanị Cancelo onye borntali mụrụ hụrụ n'anya kama ọ bụ onye ama ama nke ndị Manchester City ji obi ụtọ nabata ya na wags na Premier League.
Nwa Andre Gomes Akụkọ nke Gbasara Eziokwu
Agbanyeghị Cancelo na Daniela na-atụ anya ọmụmụ nke nwa mbụ ha n'oge a na-ede akwụkwọ, ekwenyere na ya nwere obere nwa nwoke amachara mgbe ha tinyechara foto Instagram yana nkọwa 'Nwa m 🌟❤️'.
Joao Cancelo ya na nwa ya nwoke.
Ndụ Joao Cancelo:
Joao Cancelo sitere na nzụlite ezinụlọ nke ụlọ nzụlite. Anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara ndụ ezinụlọ ya.
Banyere nna Joao Cancelo:
Cancelo nwere nna akpọrọ Joseph. Onye na-agbachitere ahụ dị nso nna ya nke ọ na-echetara mgbe niile ka ọ lezie anya maka ọganihu ya na football. Agbanyeghị na Joseph ewereghị Cancelo na mbụ, ọ kwadoro ya wee bie ndụ ugbu a iji mee ọganiihu ya.
Leroy Sane Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Banyere nne Joao Cancelo:
Mama Cancelo bụ Filomena. O doro anya na mmetụta kacha mkpa na ndụ Cancelo ka ọ na-eto ya maka ibuga ya na ọzụzụ na egwuregwu yana bụrụkwa onye kachasị nwee mmasị na ya. Ka a sịkwa ihe mere ọnwụ ya na 2013 ji hụ ụwa Cancelo ka ọ dara ka ọ na-eru újú ọnwụ na-enweghị atụ. Ọnwụ nne ya n'ihe ọghọm ụgbọ ala kpatara kpatara onye na-agbachitere ya ka ọ nwee ihe ịga nke ọma (TheSun Akuko).
Ụmụaka na-eto eto akụkọ akụkọ nke akụkọ akụkọ na-abụghị eziokwu
A zụlitere Joao Cancelo site na nne na nna na-akwado nkwado nke amachaghị banyere ya.
Banyere nwanne Joao Cancelo:
Cancelo enweghị ụmụnne nwanyị ma ọ bụ nwanne na-aza aha Pedro. Amabeghị ihe banyere nwanne ahụ n'oge edere ka Cancelo ka ga-ekpughere ihe ọ bụla banyere ya.
Banyere ndị ikwu Joao Cancelo:
Ewezuga ezinụlọ nke Cancelo, amachaghị banyere nne na nna ya ochie yana nne nne na nne nne ya. N'otu aka ahụ, enweghị ndekọ banyere nwanne nna Cancelo, nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya ebe amabeghị ụmụ nwanne nna ya na ihe omume pụtara ìhè nke ndụ nwata ya ruo taa.
Ndụ nke Joao Cancelo:
Kedu ihe na-eme Joao Cancelo akara? Nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị ịme nke ụdị onye ọ bụ iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Iji malite, onye Cancelo bụ ngwakọta nke àgwà Gemini zodiac.
Ọ na-akpali mmụọ ya, na-enwe mmụọ ma na-egosipụta ọhụụ gbasara ndụ ya na nke onwe ya. Ihe ndị na-amasị ya na ihe omume ntụrụndụ ya bụ njem, igwu mmiri na iso ndị enyi na ndị ezinụlọ nọrịa.
Pedro Goncalves Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Njem bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ Joao Cancelo ..
Web Joao Cancelo:
A ka na-enyocha ọnụọgụ Joao Cancelo, agbanyeghị, ọ nwere uru ahịa nke € 55,00 Nde n'oge edere. Isi mmalite nke obere akụ ya ama ama sitere na mbọ ya na bọlbụ ebe nyocha banyere ụzọ o si emefu ego na-egosi na ọ na-ebi ndụ okomoko.
Agbanyeghị na amatabeghị uru nke akụ ya dịka ụlọ na ụgbọ ala, ọ dịghị agọnarị eziokwu ahụ na ọ na-adị ka eze ma na-enye ndị ọhụụ nkọwa ụdị ndụ a site na ịkekọrịta foto ndị na-ejide ya na-enwe ọmarịcha oge na ntụrụndụ dị oke ọnụ ụwa.
Joao Cancelo na-ekpori ndụ n'oge ezumike dị egwu.
Joao Cancelo Eziokwu Eziokwu:
Iji kee akụkọ nwata anyị na Joao Cancelo na akụkọ ndụ ya ebe a bụ eziokwu a na-etinyeghị ọnụ na akụkọ ndụ ya.
A kpọrọ Cancelo "Gypsy" n'ihi ọdịdị gbara ọchịchịrị ya na mbibi ọ bụla mgbe egwuregwu funahụrụ ya.
Mgbe ọ bụla Cancelo na-agbago na pitch ọ na-arara arụmọrụ ya na nne ya Filomena nwụrụ.
Joao Cancelo na-enyefe nne ya nwụrụ anwụ egwuregwu ọ bụla egwuregwu ya tupu mmalite egwuregwu. Ebe E Si Nweta Foto: TheSun.
Ahụbeghị Cancelo hụrụ ka ọ na-ese anwụrụ n'oge edere. Agbanyeghị, ọ na-a drinksụ mmanya ọkụ.
Onye na-agbachitere nwere egbugbu na aka ya abụọ na ogwe aka aka ekpe ya nke na-egosi ihe yiri onyinyo nke nne ya nwụrụ anwụ Filomena.
Gedson Fernandes Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Untold
Joao Cancelo nwere okwukwe na ekpere ya.
Banyere okpukpe ya, Cancelo mụrụ ma zụlite dị ka onye Kraịst. Kaosiladị, ọ ka ga-eme ka a mara ebe o guzo n'okwu metụtara okwukwe.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Joao Cancelo Akụkọ nwata na mgbakwunye Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Andre Silva Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Akwụkwọ akụkọ Benfica
Cedric Soares Child Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
Sergio Oliveira Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Daniel Podence Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Goncalo Guedes Childhoood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Florentino Luis Childhood Story Plus Ihe Mere Ezigbo Ndụ Ihe Nketa
Darwin Nunez Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Bọchị gbanwee: Mee 22, 2021
Bọchị agbanwee: February 7, 2021